China Industrial rim ho an'ny fananganana Boom Tele Telezina Mpanamboatra sy mpanamboatra China | Hywg
Tabilao indostrialy ho an'ny mpamorona China mpamokatra Tele fisondrotana Boom
Inona no molotra indostrialy?
Isisin'ny indostrialy dia ampiasain'ny fiara maro be toy ny fananganana boom, tracteur, crane, tele handler, backhoe loader, excavator wheel sns. molotra indostrialy noho izany dia sarotra ny manasokajy azy ireo. Fa ny ankamaroan'izy ireo dia rafitra 1-PC ary ny habeny dia ambanin'ny 25 santimetatra. Nanomboka tamin'ny 2017 HYWG nanomboka namokatramolotra indostrialy satria be ny mpanjifanay OE manana ny fangatahana. Volvo Korea dia nangataka ny HYWG hivoatramolotra indostrialy ho an'ny roller sy excavatoran'ny kodia. Ny vondrona Zhongce Rubber dia nangataka ny HYWG hivoatramolotra indostrialy ho an'ny fananganana boom. Noho izany tamin'ny taona 2020 dia nanokatra orinasa vaovao tao amin'ny faritanin'i Jiaozuo Henan i HYWG hifantoka amin'nysisin'ny indostrialy Producion, ny fahafaha-manao isan-taona an'ny molotra indostrialy dia natao 300 000 isan-taona. Ny sisin'ny indostrialy dia voangona miaraka amin'ny kodiarana pneumatika mahazatra ihany koa fa ny kodiarana mafy sy ny kodiarana feno polyurethane, ny vahaolana amin'ny sisiny sy ny kodiarana dia miankina amin'ny fampiharana fiara. Tato ho ato dia niroborobo ny tsena fampisondrotana boom ao Shina, ny HYWG dia namorona rims feno ho an'ny fitaovana fampisondrotana boon.
Firy amin'ny karazana rims indostrialy?
Sisin'ny indostrialydia matetika rim-1-PC, antsoina koa hoe rim tokana, vita amin'ny vy tokana ho an'ny sisin'ny rim ary namboarina ho karazana profil samihafa izy io, ny sisin'ny 1-PC dia mazàna ambanin'ny 25 santimetatra, toy ny sisin'ny kamiao ny Ny sisin'ny 1-PC dia mavesatra, mavesatra ary haingam-pandeha, be mpampiasa amin'ny fiara maivana toy ny traktera fambolena, tranofiara, tele handler, familiana kodiarana, fiakarana boom ary karazana milina hafa. Mavesatra ny enta-mavesatra amin'ny sisin'ny 1-PC.
Inona no ilana ny sisin'ny asa?
NY molotra indostrialy azo ampiasaina amin'ny fiara toy ny:
(2) Fananganana boom
(4) Mpihady kodiarana
6.75 * 17.5 1-PC 225 / 50-17.5 Fananganana boom
7.00T * 16-2PC 2-PC 9.00-16 Fananganana boom
11X20 1-PC 315 / 55D20 Fananganana boom
11X24 1-PC 36X14D610 Fananganana boom
10X24 1-PC 33X12D610 Fananganana boom
12X24 1-PC 385 / 65D24 Fananganana boom
11.75X24.5 1-PC 355 / 55D625 Fananganana boom
13X24.5 1-PC 15-625 Fananganana boom
13X28 1-PC 385 / 45-28 Fananganana boom
9.75X16.5 1-PC 26X12-16.5 Fananganana boom
6.75x16.5 1-PC 240 / 55D17.5 Fananganana boom
16,5 × 9.75 1-PC 12-16.5 General
16,5 × 8,25 1-PC 10-16.5 General
Ny tombony azontsika amin'ny sisin'ny indostrialy?
(1) HYWG dia manolotra isan-karazany molotra indostrialy indrindra ho an'ny fananganana boom fitaovana.
(2) Ny kalitaon'ny HYWG dia voaporofo tamin'ny OEM lehibe toa an'i Volvo, JCB ary Dingli.
(3) Ny kalitaon'ny HYWG dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fanapahana fitaovana sy fitaovana matanjaka, ny ankamaroan'ny vy ampiasainay dia Q345B izay mitovy amin'ny S355 any Eropa sy A572 any Etazonia.
(4) HYWG dia manolotra fandefasana haingana sy MOQ kely
Teo aloha: Faritra forklift ho an'ny mpanamboatra Linde sy BYD China OEM
Manaraka: OTR Rim singa Sina OEM mpanamboatra singa 25 ″